8 “N’oge ahụ,” ka Jehova kwuru, “ndị mmadụ ga-achịpụtakwa ọkpụkpụ ndị eze Juda na ọkpụkpụ ndị isi ya na ọkpụkpụ ndị nchụàjà na ọkpụkpụ ndị amụma na ọkpụkpụ ndị bi na Jeruselem n’ili ha.+ 2 Ha ga-agbasa ha n’okpuru anyanwụ na ọnwa na ìgwè ihe niile dị n’eluigwe bụ́ ndị ha hụrụ n’anya, feekwa ofufe, jesookwa,+ chọọkwa ma kpọọrọ isiala.+ A gaghị achịkọta ha, a gaghịkwa eli ha eli. Ha ga-aghọ nsị anụ n’elu ala.”+ 3 “Ndị niile fọdụrụ n’ime ndị fọrọ afọ n’ezinụlọ ọjọọ a ga-ahọrọ ọnwụ kama ịhọrọ ndụ+ n’ebe niile ha bi, bụ́ ebe dị iche iche m ga-achụga ha,”+ ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru. 4 “Ị ga-asịkwa ha, ‘Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Hà ga-ada ghara ibili ọzọ?+ Ọ bụrụ na otu onye alọghachi, onye nke ọzọ ọ́ gaghị alọghachi?+ 5 Gịnị mere ndị a, bụ́ ndị Jeruselem, ji bụrụ ndị na-ekwesịghị ntụkwasị obi, ndị ekwesịghị ntụkwasị obi ha na-enweghị nkwụsị? Ha ejidesiwo aghụghọ aka ike;+ ha ajụwo ịlọghachi.+ 6 Aṅawo m ntị+, anọwokwa m na-ege ntị.+ Otú ha si na-ekwu okwu ezighị ezi. Ọ dịghị onye na-echegharị n’ihe ọjọọ ya,+ sị, ‘Gịnị bụ ihe a m mere?’ Onye ọ bụla na-alaghachi n’ụzọ ndị ọzọ na-eso,+ dị ka ịnyịnya nke na-agbaga n’ọgbọ agha. 7 Ọbụna ụgbala nke na-efe n’eluigwe maara oge ya a kara aka;+ nduru+ na elekentịọba na nnụnụ bulbul—nke ọ bụla n’ime ha maara nke ọma oge o ji alọta. Ma ndị m amaghị mkpebi ikpe Jehova.”’+ 8 “‘Gịnị mere unu ga-eji sị: “Anyị maara ihe, iwu Jehova dịkwa anyị n’aka”?+ N’ezie, mkpịsị ụgha+ nke ndị odeakwụkwọ arụwo ọrụ naanị n’okwu ụgha. 9 Ihere emewo ndị maara ihe.+ Ụjọ atụwo ha, a ga-ejidekwa ha. Lee! Ha ajụwo okwu Jehova, olee ụdị amamihe ha nwere?+ 10 Ya mere, m ga-akpọnye ndị ikom ọzọ ndị nwunye ha, nyefeekwa ubi ha n’aka ndị ga-eweghara ha;+ n’ihi na onye ọ bụla na-enweta uru na-ezighị ezi, malite n’onye kasị nta ruo ọbụna n’onye kasị ukwuu;+ onye ọ bụla na-aghọ aghụghọ, malite n’onye amụma ruo ọbụna n’onye nchụàjà.+ 11 Ha na-agbalị ịgwọ ọkpụkpụ gbajiri agbaji nke ada bụ́ ndị m, ma ha ejighị ya kpọrọ ihe,+ na-asị, “Udo dị! Udo dị!” mgbe udo na-adịghị.+ 12 Ihere ò mere ha na ọ bụ ihe arụ ka ha mere?+ Nke mbụ bụ na ihere enweghị ike ime ha. Nke abụọ bụ na ha amadịghị ihe bụ́ ihere ime mmadụ.+ “‘N’ihi ya, ha ga-eso ndị ga-ada ada daa. Mgbe a ga-elebara ha anya,+ ha ga-asụ ngọngọ,’ ka Jehova kwuru.+ 13 “‘Mgbe m ga-achịkọta ha, m ga-eme ka ha gwụ,’ ka Jehova kwuru.+ ‘Mkpụrụ agaghị adị n’osisi vaịn,+ mkpụrụ agaghịkwa adị n’osisi fig, akwụkwọ ha ga-akpọnwụkwa. Ihe m na-enye ha ga-agafere ha.’” 14 “Gịnị mere anyị ji nọdụ ala gba nkịtị? Zukọtanụ ka anyị banye n’obodo e wusiri ike+ ma nwụọ n’ebe ahụ. N’ihi na Jehova bụ́ Chineke anyị enyefewo anyị ka e bibie anyị.+ Ọ na-enye anyị mmiri e tinyere ihe na-egbu mmadụ ka anyị ṅụọ,+ n’ihi na anyị emehiewo Jehova. 15 Anyị nọ na-atụ anya udo, ma e nweghị ihe ọma merenụ;+ anyị nọ na-atụ anya ọgwụgwọ, ma, lee! oké ụjọ bịara.+ 16 A nọrọwo na Dan+ nụ ume ịnyịnya ya na-eku ọkụ ọkụ. N’ihi ubé oké ịnyịnya ya na-ebe, ala a dum amalitewo ịma jijiji.+ Ha na-abatakwa na-eripịa ala a na ihe dị n’ime ya, obodo a na ndị bi n’ime ya.” 17 “N’ihi na, lee, m na-ezite agwọ, ya bụ, agwọ ọjọọ,+ ndị a na-apụghị ịra ụrà,+ n’etiti unu, ha ga-atakwa unu,” ka Jehova kwuru. 18 M na-eru uju nke na-enweghị ngwọta.+ Obi m na-arịa ọrịa. 19 Lee, ada bụ́ ndị m nọ n’ala dị anya na-eti mkpu enyemaka, sị:+ “Ọ̀ bụ na Jehova anọghị na Zayọn?+ Ka ọ̀ bụ na eze obodo ahụ anọghị n’ime ya?”+ “Gịnị mere ha ji were ihe oyiyi ha a pịrị apị na chi ha na-abaghị uru bụ́ ndị si ala ọzọ kpasuo m iwe?”+ 20 “Owuwe ihe ubi agabigawo, oge okpomọkụ agaferewo; ma a zọpụtabeghị anyị!”+ 21 Ọkpụkpụ gbajiri agbaji+ nke ada bụ́ ndị m emewo ka ahụ́ gwụ m.+ Anọ m ná mwute. Anọ m n’ijuanya.+ 22 Ọ̀ bụ na mmanụ bọlsọm+ adịghị na Gilied?+ Ka ọ̀ bụ na e nweghị onye na-agwọ ọrịa na ya?+ Gịnị mere ada bụ́ ndị m agbakebeghị?+